I-china matte lip stick stick ileyibheli yabucala yenza i-lip stick yomthengisi i-moisturizer ileyibheli yabucala ye-matte lip stick stick kunye nabathengisi | Ubuhle beIris
Imilebe yemilebe yokubambela ileyibheli yabucala yenza ileyisi yomlomo yokuthengisa umthengisi ileyibheli yabucala yemilebe yomlomo
Ngaba uziva ubambekile kwintonga yeVelvet Matte Lip? Emva koko uza kuwa ngentloko ngenxa yeVelvet Matte Lip stick.
Le fomyula intsha-yonke yambatha imilebe yakho ngombala we-velvety-plush matte.
Kwiimithunzi ezihambelana ngokugqibeleleyo neepensile zabo zeMatte Lip.
Le duo inamandla ilungile kunye okanye iyodwa, zombini ukubonelela ngeeyure zokugubungela matte egudileyo engaziva yomile!
Egqithileyo I-lip liner ileyibheli yabucala inkohlakalo mahala siko logo velvet creamy lip liner ipeni oem lip liner lip lipencil
Okulandelayo: I-vegan eco makeup remover ioyile yokuhambisa ukucoca ioyile yabucala ukucoca ioyile kususa
Umlomo weLip Lipick
Umthengisi wentonga yomlomo
intonga yomlomo iyonke
yenza intonga yomlomo
Intonga yeMat Mat
intonga yokuthambisa yomlomo
ileyibheli yabucala yomlomo
ileyibhile yabucala imilebe yomlomo
Ihowuliseyili intonga intonga siko logo vegan Velvet li ...